FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA JACK CHI DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana Jack Chi Dog
Alika mifangaro Chihuahua / Jack Russell Terrier
Cici the Jack Chi amin'ny 1 taona— 'Cici no fitiavako amin'ny fiainako. Izy dia marani-tsaina, voaofana tsara, be fitiavana ary mahafinaritra miaraka amin'ny ankizy ... xo '
mpiandry ondry alemana malamute mix
Ny Jack Chi dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Jack Russell Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Jack Chi
Ellie the Jack Chi amin'ny faha-5 taonany— 'Jack E Chi's 5 taona, ary azontsika antoka fa izy dia saka voafandrika ao amin'ny vatan'ny alika noho ny fahasamihafana misy eo amin'ny fihetsika mazàna somary malemy paika sy ny toetrany ary ny masony rehefa fisty izy. Miara-miasa matetika ao amin'ny biraon'ny Google izy izay tiany ny manosotra kibo ary milalao amin'ireo alika G hafa anay ( filanjana & Moose ). Alika mpamonjy izy ary tena namely ny jackpot izahay fa tsy afaka nangataka fanampiana fanampiny ho an'ny fianakavianay! '
'Manana Jack Chi aho izay novonjeko tamin'ny mpiara-monina marary efa ho faty. tiako saka ary tsy tiako ny alika mandra-pihaonako io alika tapa-kevitra io. Nifidy ahy aho. Ity alika ity dia tsy hamela ahy irery rehefa mitsidika ny namako aho, mandra-panaovany ahy ho sakaizany. Tsy handray ny valiny izy. Nanomboka nitondra azy teny am-pandehanana aho satria tsy navoakan'ny namako tany ivelany. Avy eo ny namako dia nanohy nitaraina fa mila miala aminy izy. Nilaza izy fa nanohy nampanantena ny hanampy azy mandritra ny andro vitsivitsy ny mpanampy azy, nefa tsy nanao izany velively. Farany, indray andro, rehefa nitaraina izy dia nanontaniako izy raha tiany hitondra azy mandritra ny roa andro aho, nataoko izany, avy eo tsy tiany hiverina izy. Ary farany indray andro dia hoy izy: 'Hamidiko aminao $ 100 izy'. Namaly aho hoe: 'Hataonao an-tsoratra ve izany ary hanome tapakila?' Hoy izy: 'Tsy misy olana' ary efa herintaona izao no niterahako azy. Tsy nanao vaksiny na fizahana mpitsabo biby izy, ka izany no zavatra voalohany nataoko. Milanja 5,8 pounds izy ary voan'ny fivalanana. Ka azony ny tifitra nataony, anisan'izany ny haromotana, nanana medsama hamongorana ireo katsentsitra ary avy eo ny heartworm. Milanja efa ho 8 lbs izao. Tena marani-tsaina izy ary mavitrika tokoa, kanefa tiany ny manaraka ahy na aiza na aiza ary miara-mipetraka amiko raha mandry aho. TIA ny olona rehetra. Malemy fanahy amin'ny ankizy . Manana fofona maimbo ary tia mandre ny zava-drehetra. Isaky ny mihinana na inona na inona aho. Mila mitsambikina eo am-pofoako izy avy eo, na rehefa misakafo aho mba hahazoany fofona fofonaina . Tsy mila ny sakafo izy ... fa te hanitra azy. Tena entin'ny fofona izy ary mazava ho azy TIA rantsan-kazo hazo . Matetika izy dia tena mahay sy mankatò. Nentiko niaraka tamiko hatraiza hatraiza tao amin'ireo magazay rehetra aho ary tsy nisy nilaza na inona na inona mihitsy fanoherana, avy eo hitako fa tsy ara-dalàna ny alika rehetra afa-tsy ny alika mpikarakara raha ny amin'ny asa fivarotana sakafo. Ka tsy zakako intsony izy izao, fa avela hiaraka amiko any amin'ny dokotera izy ireo ary lazain'izy ireo amiko fa tsara fitondran-tena izy ka raisina an-tanan-droa amin'ny fotoana rehetra. Tena tiako io alika io ary mieritreritra aho fa izy dia santionany tsara ho an'ny Jack Chi mix. Izy dia alika mpihaza, avo angovo, tia karokaroka, manintona. '
'Bojangles aka Bo-Bo ity. Vao haingana isika no naka azy avy amin'ny fiarahamonina misy ny olombelona. Izy no iray amin'ireo alika tsara indrindra antenaiko. Tsy dia mivily izy raha tsy mahita saka na olona tsy fantany. Ny zavatra tsakoiny ihany dia ny kilalaony mitsako kely ary mamaly ny tabataba manokana ataoko ho famantarana 'tongava'. Nahagaga ahy ny hafaingam-pandehany. Niala tamin'ny tanako ny tadiny rehefa nanenjika saka izy ary manahirana ny manenjika azy, na dia nijanona aza izy rehefa niditra tany anaty ala ilay saka. Vao haingana izahay no nividy a Alika kely Chihuahua ary rehefa elaela nilalao fitiavana mafy dia nanaiky i Bo-Bo ary niasa ho ray aman-dreny ho an'i Onyx kelinay. Izy dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana mahafinaritra. '
Mix Ellen the Jack Russell / Chihuahua amin'ny faha-4 taonany
manao ahoana ny pitbull bully
Jereo ohatra misimisy kokoa momba an'i Jack Chi
Jack Chi Sary 1
Jack Chi Sary 2
Jack Chi Sary 3
Jack Chi Sary 4
miteraka alika misy lela mainty
volontany sy fotsy dane mahafinaritra